Pixel 4a nke Google ka edozichara kpam kpam tupu e webata ya | Gam akporosis
Nkagbu nke Google I / O 2020 n'ihi ọrịa mgbasa COVID-19 pụtara na Mountain View enweghị ike iwepụta ekwentị abụọ ọzọ. Otu n'ime ha chọrọ ịbụ Pixel 4a, nke dị n'etiti etiti na ga-abata tupu ngosi nke Pixel 5.
Na-esote Pixel 4a Oge eruola ka ị gbakwunye ọhụụ ọhụrụ nke nwere nnukwu akụkụ nke a ga-eweta, Pixel 4a XL, nke enwere ike ịhụ onyinyo tupu igosipụta nkọwa ya niile. Nke anọ e gosiri na foto mbụna a video na Spanish nke ọrụ, ego ga-ekwe omume Ọzọkwa ga-enwe nchekwa UFS 2.1.
Ihe zuru oke nke Pixel 4a
Ọ gaghị abụ ama kachasị mma na ahịa, ọkachasị n'ihi na ọ gụnyere otu igwefoto na azụ, ma ọ dịkarịa ala nke ahụ bụ ihe 9to5Google kwuru, onye na-ekwu maka ihe mmetụta 12,2 MP na mgbatị anya na ndekọ 4K vidiyo na 30 FPS. Google ga - etinye ndozi na ngwanro a, nke gunyere bokeh site na AI.
Nhọrọ nke ihuenyo abụrụla ihe ngosi 5,81 nke anụ ọhịa OLED na mkpebi HD zuru oke (2.340 x 1.080 px), nha 19: 5: 9 ma dochie ọkwa ahụ na perforation na ekpe maka igwefoto selfie. Sensọ nke Google họpụtara maka ihu ga-abụ otu n'ime megapixels asatọ na elele ọhụụ nke ogo 8.
Ihe nhazi ahụ ga-esi na Snapdragon 7 usoro, onye ahọrọ na nke a bụ Snapdragon 720 okpukpu asatọ na ọsọ nke 2,2 GHz, 6 GB nke Ram na 64 GB nke nchekwa na-enweghị oghere MicroSD. Batrị ahụ e kwuru na mbụ bụ 3.080 mAh yana ụgwọ ngwa ngwa nke 18W ma zuru oke iji ngwaọrụ ahụ ụbọchị niile.
El Google Pixel 4a ga - agbakwunye mgbawa nche Titan MNke a kwukwara na ama ga-abịa na ụlọ ọrụ mmepụta ihe nke gam akporo 10 maka nkwalite ndị nsụgharị Google wepụtara.
Image - @Onleaks.
Pathzọ zuru ezu na edemede: Gam akporosis » Ngwa gam akporo » Mobiles » Pixel 4a nke Google zuru oke tupu ekpughe ya